FIAINANY TALOHA Counter Strike lalao ► Counter Strike 1.6 Download
FIAINANY TALOHA Counter Strike lalao
Tantaran'i Counter Strike:
Counter-strike dia iray amin'ireo lalao karazana fitifirana olona malaza indrindra teo amin'ny tantara. Izy io dia manana tantaran'ny lalao lava, mahaliana ary tsy manam-paharoa. Angamba ny ankamaroanareo dia tsy mahalala momba ny tantaran'ny Counter-strike, iray amin'ireo lalao video lalaovina indrindra amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny maha-gamer anao dia tokony ho fantatrao ny fivoaran'ny Counter-strike avy amin'ny scripted tanteraka, ny fahatsaran'ny mpilalao tokana dia nanjary haingana ho iray amin'ireo lalao video malaza indrindra, misintona be ary nilalao indrindra tamin'ny fotoana rehetra. Fahamarinana mazava-kristaly izay nandikana kinova 17 beta ho an'ny Counter-strike ho velona amin'ny maha-fikambanana tsy miankina amin'ny tontolon'ny lalao. Na eo aza ny lalao taloha, ny mpilalao matihanina ary koa ny olona an-tapitrisany maro mbola milalao, ary mankafy Counter-strike.
Ny niandohan'ny lalao:
Tamin'ny taona 1999, 21 taona lasa lasa izay, ny fiaraha-miasa Valve dia namolavola ny lalao voalohany, lalao shooter olona voalohany antsoina hoe Half-Life. Valve Corporation dia mpisava lalana an'ny Counter-Strike. Izy io dia American Company izay mpanonta sy mpamorona lalao informatika. Ny Sierra Studios dia namoaka ny antsasaky ny fiainana niaraka tamin'ny gadona goavambe ary mpilalao avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia niafara tamin'ny fitiavana ny lalao. Counter-strike vetivety dia nanjary nalaza be teo amin'ireo mpilalao hany ka nisy vondrom-piarahamonina iray manontolo novolavolaina nanodidina azy, ary nanomboka nanao mods ho an'ny tsirairay ny mpandahatra fandaharana.
Ireo programmer kanadianina Minh Le sy ny namany Jess Cliffe, dia namorona kinova beta an'ny Half-Life mod, Counter-Strike. Naharitra iray volana sy tapany ny kaody mba hamoahana ny kinova beta voalohany an'ny Half-Life.
Nanohy ny tolona nataon'i Min Le sy Jess Cliffe hampivelatra ny betas ary koa namorona tranokala ho an'ny CS. Tamin'ny voalohany dia tsy nisy afa-tsy sarintany efatra sy fitaovam-piadiana sivy Counter-Strikena izany aza, mbola teo ilay toerana malaza. Ny olona taloha dia nilalao diabe 5v5 nifidy ny ho mpanohitra ny mpampihorohoro na ny mpampihorohoro, ary mbola ireto ekipa roa ireto ihany no ampiasaina ankehitriny. Miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana, Counter-Strike nahasarika kokoa ny sain'ny olona ary lasa tia ny lalao ny olona.
Noho ny fitomboan'ny lazan'ny Counter-Strike ary rehefa afaka roa taona mody namboarina ho an'ny fiaraha-monina dia nahasarika ny mason'izy ireo ny mpikaroka lalao Valve ary nanakarama an'i Le sy Cliffe taorian'ny famoahana ny beta fahadimy tamin'ny 2000. Nahazo Valve Counter-Strike ary ireo programmer Minh Le sy jess Cliffe dia nanomboka niara-niasa tamin'i Valve. Counter-Strike Navoaka tamin'ny farany tamin'ny PC tamin'ny volana septambra 2000, nahatonga azy io hanomboka amin'ny fomba ofisialy ny Counter-Strike andian-dahatsoratra.
Ny tompon'andraikitra voalohany navoaka ny Counter-Strike nanana sarintany malaza roa, Assault (cs_assault) sy Cobblestone (de_cabble) ary tany an-tanety ihany no nilalaovana azy. Amin'ny maha mody azy dia nanana fanarahana be izy io aorian'ny famoahana andiany ofisialy a counter strike ho an'ny PC dia nampitombo ny lazany tamin'ny vala maro teo amin'ny maro.
Mitsangana ny laza:
Ny fiarahamonina Counter-Strike nanjary nihalehibe sy nihalehibe satria nihamaro ny olona nanomboka nilalao ilay lalao. Ny fiakaran'ny laza dia niavaka satria nilalao eran'izao tontolo izao. Multiplayer efa nisy teo aloha, fa Counter-Strike zavatra hafa ary mora ny niditra lalao fotsiny. Tsy ilaina ny mandany ora maro eo alohan'ny solosaina hilalao lalao amin'ny namana na olon-tsy fantatra. Afaka milalao minitra na andro vitsivitsy ny olona arakaraka ny fotoana misy. Lalao tsy manam-paharoa sy mora nilalao nefa sarotra ny mahafehy. Noho ny endriny tsy manam-paharoa sy ny natiora manahirana azy, dia lasa malaza eo amin'ny gamer izy io. Lalao video nataon'ny olona ho an'ny pro izy io. Izy io dia heverina ho iray amin'ireo lalao multiplayer manan-kery indrindra noforonina. Amin'ny tontolo ankehitriny, afaka mahita mekanika marobe ianao Counter-Strike nampiharina, na farafaharatsiny nanampy tamin'ny fizarana tamin'ny alàlan'ny lazany.
Andininy sy fanavaozana ny Counter-Strike:
Ny fiakaran'ny CS tsy mbola nisy toa azy sy ny mety hisarika olona dia nanjary nanao zavatra bebe kokoa ny mpamorona mba hahatonga ity lalao ity hahaliana sy hahasarika olona kokoa. Ny hetahetan'ny olona dia lasa hevitra ary novain'ny mpandahatra ny fandaharana ho lasa tena izy. Ny orinasa Valve dia nampiditra ny rafitra Anti-Cheat (VAC) azy tamin'ny taona 2002. Ity rafitra ity dia saika tsy azo atao ny manambaka na mijirika, ary raha misy mpilalao manandrana manao izany, dia mahazo fandrarana eo noho eo izy. Valve dia nampiditra sarintany sy fitaovam-piadiana vaovao ho an'ny mpampihorohoro sy mpiady Counter ao Counter-Strike kinova 1.1 tamin'ny 2003.
Valve, Ritual Entertainment ary Turtle Rock Studios no nivoatra Counter-Strike: Condition Zero tamin'ny 2004 ary navoaka hihaino an'i Sierra. Izy io dia samy manana ny endriny amin'ny maody mpilalao tokana sy marobe. Nanaraka ny fanentanana iray fotsiny ireo mpandahatra ny fandaharana tamin'ny fampielezan-kevitra iray antsoina hoe "The Scenes voafafa". Manatsara ny sary ihany koa izy ireo, saingy tsy nahomby izany. Ny ankamaroan'ny mpilalao dia nahita fa tsy mendrika izany ary tsy liana amin'ny famindrana ilay marika vaovao Counter-Strike kinova. Tsy afa-po tamin'ny lalao vaovao izy ireo ary aleony taloha Counter-Strike over Counter-Strike: Toetran'ny Zero. Rehefa nandeha ny fotoana, dia nanolotra vaovao an'ny Valve Counter-Strike toy ny Counter-Strike: Loharano ary Counter-Strike: Fanafihana manerantany amin'ny 2010
Taorian'ny famerenana matetika sy fanavaozana an'arivony dia nanampy tamin'ny famadihana ny lalao ho lasa ankehitriny ny valve. Niasa foana izy ireo Counter-Strike araka ny fanirian'ny mpankafy sy ny vondrom-piarahamonina izay mahatonga ny CS tsy lalao video tsara indrindra ihany hatramin'izay fa hanome azy ity lalao tiako indrindra eran'izao tontolo izao. Iraika amby roapolo taona taorian'ny nanoratana ny tany am-boalohany Counter-Strike, mbola velona ary olona an-tapitrisany eran'izao tontolo izao no mbola tia milalao CS. Amin'ny lafiny rehetra dia lalao lavorary izy io satria manana fandanjalanjana tonga lafatra amin'ny fisakaizana-mpampiasa sy ny fifaninanana. Counter-strike dia mora ny mianatra lalao, saingy sarotra ny mahafehy azy. Halefa amin'ny taranaka ho avy io.
Mety ho tianao koa ny dikan-teny hafa amin'ny counter-strike: COUNTER-STRIKE 1.6 Download free